मधुमेह हुन नदिन र भएपछि कस्तो खानपान गर्ने ? यी ९ सरल घरेलु विधी अपनाउनुहोस् « NagarikTimes
मधुमेह हुन नदिन र भएपछि कस्तो खानपान गर्ने ? यी ९ सरल घरेलु विधी अपनाउनुहोस्
७ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:५२
एजेन्सी : साधारणतया हामीले खाएको खाना शरीरभित्र विभिन्न प्रक्रियाबाट चिनी अर्थात् ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ । प्याङ्क्रियाजबाट निस्कने इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई कोषहरुमा पुर्‍याउँछ र शक्तिमा परिणत भई शरीरका विभिन्न कार्य सञ्चालनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । इन्सुलिन आवश्यक मात्रामा उत्पादन नहुँदा या प्राप्त इन्सुलिनको उपयोग राम्ररी नहुँदा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्ने अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ।
बनेको इन्सुलिन शरीरले उपयोग गर्न नसक्दा पनि मधुमेह हुन्छ । साधारणतया ३० वर्ष नाघेका वयस्क व्यक्तिमा यस्तो हुने भए पनि परिवर्तित जीवनशैली, अस्वस्थकर खाना, शारीरिक रुपले निस्क्रिय, मद्यपान, मानसिक तनाव लगायतका कारणले कम उमेरका व्यक्तिमा मधुमेहको समस्या देखिने गरेको पाइन्छ।
यी १० घरेलु उपाय अपनाएर मधुमेहको बिरामीले राहत पाउन सक्छन् :
प्रकाशित मिति: ७ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:५२
मोटोपनबाट छुटकारा पाउन गर्नुहोस् यी ५ बियाँको प्रयोग जसले गर्छ तौल घट्नमा मद्धत
मनिसहरु कतिपए अवस्थामा आफ्नो मोटापनका कारण तनाबमा भईरहेका हुन्छन् । खानपान र रहन सहनका कारण
मनाउनुहोस् होली दिल खोलेर , साथै अपनाउनुहोस् कपाल जोगाउने यी ८ काइदा
होलीको रमाइलोमा जथाभावी रंगको प्रयोग गरिन्छ । आफुले प्रयोग गर्ने रंग मात्र होइन, अरुले छ्याप्ने
डाइबिटिजदेखि दमसम्म : हेर्नुहोस् बहुउपयोगी दालचिनीका अनगिनत फाइदाहरु
दालचिनी हाम्रो भान्छामा सजिलै पाइने मरमसला हो । यसलाई प्राय: चियामा हालेर खाने गर्दछ ।
शरीरमा किन र कसरी काँडा उम्रन्छ ? हेर्नुहोस् विज्ञानले के भन्छ त ?
काठमाडौँ : जाडो मौसम होस् वा तर्सिएको अवस्था हाम्रो शरीरको छालामा स-साना बिमिरा देखिन्छन्, यसलाई
थाहा पाइराख्नुहोस् : कुन चिजलाई कति बेला खाँदा उत्तम मानिन्छ ?
काठमाडौँ : भोक मेटाउन जतिबेला जुन खाना भेट्यो त्यही खाने धेरैको बानी हुन्छ । कुन
के तपाईलाई थाइराइड त भएको छैन ? जानिराख्नुहोस् यसका बारेमा सबै सत्य-तथ्य
काठमाडौँ : थाइराइड शरीरको एक ग्रन्थी हो । हाम्रो शरीर करोडौँ कोष मिलेर बनेको हुन्छ